Imveliso - Ningbo J & S Botanics Inc.
yayakhelwe efektri yethu ukuhlangabezana umgangatho GMP kwaye yambethe iseti epheleleyo izixhobo imveliso kunye novavanyo phambili. line yethu imveliso kuquka ekrwada izinto screwdriver, itanki gesi, lwepolitiki concentrator, umhlathi chromatography, izixhobo zokwenza nyulu inwebu eziphilayo, ezintathu - ikholam centifuge, izixhobo yokomisa lwepolitiki, izixhobo yokomisa yokutshiza kunye nezinye izixhobo phambili. Zonke yokoma, ukuxuba, ukupakisha kunye nezinye iinkqubo zenziwa eklasini 100,000 kwindawo ecocekileyo, ngokungqongqo ngokulandela GMP kunye ISO nemigangatho.
Yeemveliso nganye, iWCED iphuhlise inkqubo epheleleyo kunye eneenkcukacha yemveliso ilandelayo umgangatho SOP. Bonke abasebenzi zethu ziye baqeqeshwe kakuhle kwaye kufuneka bapase iimviwo engqongqo phambi kokuba bavunyelwe ukuba ukusebenza kumgca yemveliso. Le nkqubo lonke olawulwa esweni liqela abaphathi zemveliso abanamava. Inyathelo ngalinye sifakwe kumaxwebhu yaye ezilandeleka ngomkhondo kwingxelo yethu msebenzi.
Ngaphezu koko, siye engqongqo on-site QA monitoring protocol leyo ebandakanya zaphandwa ndzulu, uvavanyo kunye nokurekhodwa emva inyathelo yonke ebalulekileyo kumgca yemveliso.
efektri yethu kunye neemveliso sele kudlule Uhlolo ezininzi ngqongqo eyenziwa ngabathengi ezixabisekileyo ezivela kulo lonke ihlabathi. Izinga ezinesiphene izicatshulwa zethu esintu kuba ngaphantsi kwe-1%.